Fifanomezan-tanana ny kaominina , Miezaka hatrany ny Faritra Analamanga - Madagascar Informations
22 juin 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire analamanga
Notanterahina ny zoma 17 jona 2016 ny fampitaovana andiany faha-2 ho amin’ny kaominina ny Faritra Analamanga amin’ity taona ity raha notanterahina ny faran’ny volana martsa 2016 ny fampitaovana voalohany.
Fangatahana miisa 200 eo ho eo no efa voaray teo anivon’ny Faritra Analamanga nanomboka tamin’ny volana janoary, ka kaominina 35 no hahazo ny anjarany amin’ny andianay faha-2 ity raha 23 izany tamin’ny andiany voalohany.
Samy nahazo avokoa ny distrika 8 eto amin’ ny Faritra Analamanga ary hita fa nitombo isa ireo kaominina nahazo fampitaovana.
Miezaka hatrany ny Faritra Analamanga izay tarihin’ny lehiben’ny Faritra, Ndrato RAKOTONANAHARY amin’ny fifanomezan-tanana amin’ireo kaominina, ezaka iraisana ho amin’ny fampandrosoana ifotony.
(Tôle, ciment, bois rond, madrier fer, peinture à l’eau, peinture à l’huile, brouette) ireo no fitaovana izay nozaraina ; ireo fitaovana ireo moa dia entina hanampiana ny kaominina amin’ny asa fanorenana fotodrafitrasa toy ny sekoly, CSB, tetezana, lalana ….na fanampiana kaominina itrangan-doza, tahaka ny hay trano niseho tany Kianga distrika Ankazobe ary nikasika fokotany 2.
Ankoatra ny lafiny ara-pitaovana dia miezaka hatrany ny Faritra Analamanga ny amin’ny fampirisihana ny kaominina amin’ny fanomezana vahana ny asa-tanamaro mba ho fanomezana andraikitra sy fampahatsiarovan-tenan’ny fokon’olona. Amin’izany dia vary sy vaomaina no entin’ny Faritra hanampiana ny kaominina.
Misy ihany koa ireo fanamboarana hiandraiketan’ny Faritra Analamanga avy hatrany, ohatra : fanamboarana trano-tsekoy tany amin’ny kaominina ambanivohitra Ambatofahavao ary efa natao « reception provisoire » tamin’ny 16 may 2015 .
Eo amin’ny sehatra ara-tsosialy dia maro ireo tetik’asa eto anivon’ny Faritra Analamanga ohatra : ny fanamboarana ny « maison des jeunes » etsy Ambohidratrimo.
← Codex Alimentarius : dix ans du comité National de Madagascar
Géographie de Madagascar →
29 mai 2016 Madagascar Informations 0
OLONA 7 AMIN’NY 10 NO IHARAN’NY HERISETRA
30 décembre 2017 Gasikara 0